မြှောက်ထိုးပင့်ကော် သဂျီး နှင့် တို့မီးရှို့မီး ဆိတ်လဇိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြှောက်ထိုးပင့်ကော် သဂျီး နှင့် တို့မီးရှို့မီး ဆိတ်လဇိ
မြှောက်ထိုးပင့်ကော် သဂျီး နှင့် တို့မီးရှို့မီး ဆိတ်လဇိ
Posted by ဘဲဥ on Apr 23, 2013 in Creative Writing | 16 comments
ဗျို့ သဂျီး..ရွာထဲမှာ မီးလောင်နေပြီဗျ………. အလောတကြီးပြေးလာပြောတဲ့ အံချာဒုံးကိုကြည့်ပြီး ၊ သဂျီးကလည်း ငါသိပါတယ်ဆိုတဲ့ဂိုက်မျိုးဖမ်းကာ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုကောင်ဆိတ်လဇိ ကောက်ရိုးပုံ မီးရှို့ပြန်တာလား ဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ ၊ အဲ့တာတင်ဘယ်ကမလဲဗျို့ .. သဂျီးမင်း ဝယ်မလို့ ဈေးဖြတ်ထားတဲ့ ကိုပေ့ရဲ့ နွားကြီးကို ကင်စားမယ် တကဲကဲလုပ်နေလို့ဗျို့.. အဲ့တာလာခေါ်တာ
ထိုအခါမှပဲ သဂျီးမင်းလည်း ပြူးပြူးပြာပြာနဲ့ လက်စွဲတော် နှစ်လုံးပူးသေနတ်ကြီး ကောက်ကိုင်ပြီး ဒုံးဆိုင်းပြေးလိုက်သွားတော့တယ်။
ဟော… တွေ့ပါပြီဗျာ ရွာလည်ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာ ရွာ့ကာလသားတစ်သိုက်က ဆိတ်လဇိဟူသောရူးပေါပေါကောင်ကို ဝိုင်းပြီး ဆော်လဘန်တေနေကြတာ။ သဂျီးမင်းလည်း မနေသာတော့ဘဲနဲ့
သဂျီးမင်းရဲ့ အာဏာ တော်တော်ပြင်းထန်ပုံရတယ်။ တစ်ယောက်မှ လှည့်မကြည့်ကြဘဲ (၆ရေးမလုပ်တာလည်းပါမှာပေါ့ ) ဆိတ်လဇိကို ဝိုင်းဘေနေလိုက်ကြတာ ဆုံထဲထည့်ထောင်းတဲ့ဆန်ဆိုရင် ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေနေလောက်ပြီ။ သဂျီးလည်း ပြောမရတဲ့အဆုံး သူ့လက်စွဲတော် နှစ်လုံးပူးသေနတ်ကြီးကို မိုးပေါ်ထောင်ပြီး (လူအုပ်ထဲ မချိန်ရဲတာလည်း ပါတာပေါ့) သေနတ်မောင်းကို ဆွဲညှစ်လိုက်တယ်။
သေနတ်သံကြားမှပဲ ဆိတ်လဇိကို လက်မလည်အောင် ဝိုင်းပြီး ဆော်လဘန်တေနေကြတဲ့ ရွာ့ကာလသားတွေ နည်းနည်း ကိုယ်ရှိန်သတ်သွားကြတော့တာ။ ဒါတောင်မှ ရွာ့လူမိုက် ကိုအောင်ကြီးဆိုရင် ငါလခွီးမ ဆိတ်လဇိ သဂျီးရောက်လာလို့ မင်းသက်သာတယ်မှတ်ပါ ဆိုပြီးတော့ ပါးစပ်ကလည်းပြော လက်ကလည်း ဖြောင်း ကနဲနေအောင် နားရင်းရိုက်ပြီး အစားပီတ်အနေနဲ့ တွယ်ထည့်လိုက်သေးတာ။ အားလုံး ငြိမ်သွားမှပဲ သဂျီးမင်းလည်း ဟေ့ကောင်တွေဖယ်ကြစမ်းဆိုပြီး ပြူးပြူးပြာပြာနဲ့ ဘယ်မှာလဲ ငါဝယ်ဖို့ ဈေးဖြတ်ထားတဲ့ ကိုပေ့ရဲ့ နွားကြီး ဆိုပြီး အသည်းအသန်လိုက်ရှာတယ်။ တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သဂျီး ရွာသားတွေ ဝိုင်းဘေထားလို့ မျော့မျော့ပဲကျန်တဲ့ ဆိတ်လဇိကိုတောင် ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ပြာယာခတ်နေတဲ့ သဂျီးကို ဖရဲသီးဆိုတဲ့ ရွာသားတစ်ဦးကနေပြီးတော့ သိပ်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ သဂျီးရယ် ခင်ဗျားဝယ်မယ့် နွားကြီး ဘေးမသီရန်မခပဲ ရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်မှ စိတ်အေးသွားဟန်နဲ့ သက်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်တော့တယ်……..
ဆက်ရန်……….. (တူညားဒွေဂို အားကျလို့ အပိုင်းခွဲပြီးဒေါ့ တင်လိုက်ဒါ )
ဟေ့ .. ရွာထဲကို ပူညံပူညံ လာလုပ်ဒါ …
ရှိတဲ့ ဥ ကွဲတွားဂျင်ရို့လား …
ညည်းနံမယ်ကို ရှေ့ဇုံးဂ တင်ပေးထားဒါနော် …. ဟွင်း ဘီအီးလိုက်တိုက် ဒါဗျဲ ……..
ဘဲဥ လည်းခေတ်မှီလာပြီ အပိုင်းဆက်နဲ့ ရေးမတဲ့။
ကိုရီးယားဒွေကို အားကျလို့ အဟီးးးးး
အဲ ဥဥ တို့ကတော့ လုပ်လိုက်ပီ …
တိုတိုလေးပဲ ရှိသေးတယ် စာက …
ဆက်ရန် တဲ့ ရိုက်စားပဲအေ …
ဟဲ့ ဟဲ့ မိဂျူး
တိုတိုလေးပဲချိတေးဒယ် ချိုလို့ အဟီး… နောက်ကနေ ဝါကျအဆက်ပါလာလို့ တော်တေးဒယ်အေ
သဂျီး ရှာနေတဲ့ နွားကြီးကတော့ လက်သွက်တဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့သွားရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါ့ :harr:
ချို တွေ ့ဆွဲ သွားဖြီး
အို မေ့ လဲ ကုလားမီး
ပျိုရှေ ့ကဲ ကားစီး
အမိန့်မရပဲ သေနတ်ဖောက်တဲ့ သဂျီးကိုရာထူးချ
ဒါဆို ဥ က ဆိတ်လဇိလားဟင်……
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဥ နာမည် မပါသလိုပဲနော်…..
အဲဒါ တရားဥပဒေ မိုးစိုမှု မရှိလို့ဗျ… မိုးမရွာရင် ကိုယ့်ဟာကို ရေဖြန်းပေးဂျ…
အရမ်းမီးသတ်ဗိုလ် ကိုခင်ခ ဘာလုပ်နေသဒုံး..ဒီမှာရွာခဏခဏမီးလောင်နေဗီ
.. ဆိတ်လဇိ ဆိုတာက..
ဆိတ်လမ်းလျှောက်ရင်.. တွဲလောင်းနဲ့.. ပေါင်၂ချောင်းရဲ့.. ဟိုဖက်ကပ်လိုက်.. ဒီဖက်ကပ်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာဗျ..
လူမှာ.. သာမယ်ထင်တဲ့ဖက်.. ဟိုဖက်ပြေးကပ်.. ဒီဖက်ပြေးကပ်.. အဲလိုလူကို.. ဆိတ်လဇိလိုလူလို့.. ခေါ်တယ်..။
ဘဲဥ စိတ် လဆိ ……….။
အဲဒါ ဘယ်သူလဲဗျ။ လင်းစမ်းပါဦး။ အားပေးသူ နည်းနေတယ်ထင်လို့ လက်မထောင်ပေးသွားတယ်။ ထောင်ထားတဲ့ တခုတည်းသော လက်မဟာ ကျနော် ထောင်သွားခဲ့တာ။ တခု အကြံပေးမယ်။ သဂျီးလို့တော့ နာမည်ဗြောင်မတပ်နဲ့။ မကောင်းဘူးဗျ။ အမှန်က ရသမြောက်အောင်ဆိုရင် သူလို့ နာမည်မတပ်ပဲနဲ့ကို ဖတ်တဲ့လူတွေက သူမှန်းသိနေပြီး သူကလည်း ရှူးရှူးရှဲရှဲ ဒေါသတွေထွက်ပြီး ကွန်မန့်တွေနဲ့ ခင်ဗျားကို လိုက်ပြီး တိုက်ခိုက်မှ ရသမြောက်တာ။